Banyere Anyị - Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co., Ltd.
Guzobe na 2002, Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co., Ltd (XJCM). bụ ụlọ ọrụ na-ekenye òkè na ego itinye ego nke RMB16 nde. Companylọ ọrụ anyị na-ekpuchi ebe 53 puku mita anọ, 38 ọtụtụ puku n'ime ha bụ maka ọhaneze. Anyị na-onwem na ihe karịrị 260 ika-ọhụrụ na elu ụlọ ọrụ. Anyị ipuiche n'ichepụta nnukwu ihe owuwu nke ihe eji arụ ọrụ na ikike ikike kwa afọ anyị bụ 20 puku metrik tọn. A na-eji igwe ọgbara ọhụrụ maka njikwa ọnụọgụ, ịgbado ọkụ, ịkpụzi na ọgwụgwọ okpomọkụ na usoro nke mmepụta anyị. XJCM isi ngwaahịa ndị siri ike teren kreenu, gwongworo kreenu, onwe -erecting ụlọ elu kreenu, multifunctional pipelayer na ọtụtụ mwube ígwè akụkụ. Ha bụ n'ezie nke ụkpụrụ dị mma.
XJCM bụ otu n'ime asọmpi na magburu onwe soplaya maka XCMG. Anyị na-enye excavator bọket, Load na bọket, rocker ogwe aka, agbatị, ọganihu, n'ihu okpokolo agba, n'azụ okpokolo agba, pin na-apụta na ndị ọzọ yiri ngwaahịa na XCMG, CAT, FOTON ， LIUGONG, HELI forklift, YUTONG na ọtụtụ ndị ọzọ a ma ama ígwè ụlọ ọrụ na China. Anyị RT usoro cranes, QY usoro ụgbọala kreenu na JFYT usoro ụlọ elu kranu na-exported ka North America. South America, Africa, Middle East, West Asia, Southeast Asia na ndị ọzọ karịa mba 30 na mpaghara.
Onye ahia anyi: • Diamond Projects Malta • AGRO ACCESSORIES (NZ) LIMITED • Avsrya Construction • BALBANS GROUP & INVESTMENT LTD. • SWISS GRADE CONSULT LIMITED • SAMAD RESOURCES LTD. • Tayo Propert Mamagements Ltd.
Site na ike siri ike na usoro ochichi ụlọ ọrụ zuru oke, ụlọ ọrụ ahụ edepụtara nke ọma na Jiangsu Equity Exchange Center wee bụrụ onye otu mpaghara ahịa azụmaahịa mpaghara. N'ime ha, DGY usoro multi-ọtọ pipelayer na Self-loading idebe ụgbọ merie ụwa mepụtara Ikike nchọpụta Kemịkalụ. JFYT usoro ngwa ngwa na-akpụ akpụ onwe-ewuru ọgụgụ isi ụlọ elu kreenu bụ nke mbụ ngwaahịa na China. The "RT usoro pụrụ-ụzọ kreenu" onwe nyochara na mepụtara site na ụlọ ọrụ a ghọtara dị ka "elu-tech ngwaahịa" site Science and Technology Department of Jiangsu Province na e depụtara na "National Torch Plan Industrialization Ngosi Project" site Ministry nke Sayensị na Nkà na .zụ.
• Kemgbe ntọala ya, ụlọ ọrụ ahụ etinyela nke ọma na ngwa igwe na nnwale dị elu, ma nwee nzukọ mmepụta na ikike nhazi nke ihe karịrị puku atọ nke nnukwu ngwa ọrụ na akụrụngwa.
2500T CNC ekwe igwe
Igwe buru ibu na-agwụ ike
• Ngwa ndị ọzọ dị ka akụrụngwa ịcha laser, igwe mkpụkọ plasma ọma, igwe na-agwụ ike na igwe igwe.
Igwe ọnwụ plasma CNC
CNC laser ọnwụ igwe
• Atọ-achikota nchọpụta, ịgbado ọkụ oghom detector, wdg, niile nke bụ ihe ndị kasị elu akụrụngwa na China.
Wing akpaka ịgbado ọkụ
Ihe nchikota ato
Companylọ ọrụ ahụ nwere sistemụ njikwa mmesi obi ike zuru oke, wee gafere ISO9001 njikwa njikwa njikwa, ISO18001 ọrụ ahụike na nchekwa njikwa asambodo na CE asambodo, asambodo GOST. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwere teknụzụ ikike nke 56, gụnyere ikike nchọpụta 15 na ikike ịba uru 41.
The ụlọ ọrụ integrates technology, isi obodo, talent, bughi mmiri, na-ewe ụlọ ọrụ dị ka ibu ọrụ, ime ihe n'eziokwu, àgwà dị ka mgbọrọgwụ, na-eweghachi otu na elu-edu injinịa ngwaahịa ngwaahịa!
Adreesị:NO.1 Dapeng Industrial Park, Tongshan District, Xuzhou, Jiangsu, China